Yechina yekutanga vhezheni yeGIMP 3.0 yakaunzwa uye idzi ndidzo shanduko dzayo | Linux Addicts
Yechina yekutanga vhezheni yeGIMP 3.0 yakaburitswa uye idzi shanduko dzayo
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kweshanduro itsva yemupepeti wemifananidzo GIMP 2.99.8 yakaziviswa iyo iripo yekuyedza uye inoenderera mberi nekuvandudzwa kwekushanda kweiyo remangwana rakagadzikana bazi reGIMP 3.0, umo shanduko kuenda kuGTK3 yakaitwa.
Pakati pekuchinja kunomira pachena tinogona kuwana izvozvo yakawedzera tsigiro yakajairika yeWayland neHiDPI, Iyo kodhi base yakacheneswa zvakanyanya, API nyowani yakarongedzwa yekuvandudza plugin, kupa caching kwakaitwa, rutsigiro rwekusarudza akati wandei matse (akawanda-masarufa kusarudzwa) akawedzerwa, uye kugadzirisa mune yekutanga ruvara nzvimbo yakapihwa.
Zvishandiso zve yakasarudzika kopi Clone, Gadzirisa uye Outlook zvino vane kugona kushanda kana akawanda akaturikidzana asarudzwa. Kana, pakusarudza akawanda masosi masosi, mhedzisiro yekushanda inoiswa kune yakaparadzana mufananidzo, ipapo iyo data yekushanda inoumbwa pahwaro hwekubatanidza zvidimbu, uye kana mhedzisiro yacho ikaiswa kune imwechete seti yezvikamu, ipapo. kushanda kunoshandiswa muzvikamu.
Yakagadziriswa kuratidzwa kwesarudzo yebhodha mune composite windows mamaneja akavakirwa MuWayland protocol uye mune zvemazuva ano macOS, iyo yaimbove isina kuratidza maratidziro pacanvas. Shanduko iyi zvakare yakarongwa kuendeswa kubazi rakagadzikana reGIMP 2.10, uko nyaya yakazviratidza chete paMacOS, semuWayland-based nharaunda iyo GTK2-based vhezheni yaiitwa uchishandisa XWayland.
Mukuumbwa muFlatpak fomati, panzvimbo yeropafadzo mu x11, ivo zvino vakumbirwa kuti vadzokere-x11, izvo zvakaita kuti zvibvire kubvisa kusingakoshi kuwana kune x11 kushanda kana uchishanda munzvimbo dzeWayland-based. Zvakare, hombe ndangariro inodonha kana ichimhanya munzvimbo dzeWayland-based yakanyangarika (sezviri pachena nyaya yacho yakagadziriswa mune imwe yeWayland-chaiwo kutsamira).
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo Windows Ink yawedzerwa (Windows Pointer Input Stack) kune GIMP uye GTK3 paWindows kushanda nemapiritsi uye maturusi ekubata asina madhiraivha eWintab. Yakawedzera sarudzo kuWindows marongero ekuchinja pakati peWindows neWintab inki stacks.
Ipa kugona kudzosa kutarisa kune canvas nekudzvanya chero pachoolbar, zvakafanana nekudzvanya kiyi Esc.
Yakabvisa iyo icon yebasa bhari kuratidza ine yakavhurika mufananidzo thumbnail yakamisikidzwa pane iyo GIMP logo.
Kupindirana uku kwakaita kuti zviome kune vamwe vashandisi kuona GIMP windows paive nenhamba huru yemaapplication aimhanya pane system.
Yakawedzera rutsigiro rwekurodha nekutumira kunze kweJPEG-XL (.jxl) mifananidzo ine grayscale uye RGP color profiles, uye tsigiro yekusarasikirwa encoding.
Rutsigiro rwakavandudzwa rweAdobe Photoshop purojekiti mafaera (PSD / PSB), iyo iyo 4GB saizi muganho yakabviswa. Nhamba yakabvumidzwa yemachaneli yakawedzerwa kusvika 99 chiteshi. Yakawedzera kugona kurodha mafaera ePSB, ari chaizvo mafaera ePSD ane tsigiro yezvisarudzo zvinosvika 300K pixels kureba uye kureba.
Tsigiro yemifananidzo ye16-bit SGI yakawedzerwa.
Iyo plugin yeWebP tsigiro yemufananidzo yaendeswa kuGimpSaveProcedureDialog API.
Script-Fu inopa kubata kweGFile uye GimpObjectArray marudzi.
Yakawedzera API masimba ekuvandudza plugin.
Izvo zvivakwa zvakawedzerwa kuyedza shanduko kune inoenderera yekubatanidza system.
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa GIMP paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi nyowani vhezheni yeGIMP kumasystem avo, Ivo vanofanirwa chete kuve nerutsigiro kuti vakwanise kuisa kunyorera kubva kuFlatpak.
Ingo mhanya unotevera kuraira kuti uise iko kunyorera pane ako masisitimu:
Hongu ndinoziva vane GIMP yakaiswa neiyi nzira, vanogona kuigadzirisa nekumhanya iwo unotevera kuraira:
Kana iwe uchimhanyisa, iwe unozoratidzwa runyorwa rwezvishandiso zvakaiswa neFlatpak ine iyo yekuvandudza. Kuti uenderere mberi, ingonyora "Y".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yechina yekutanga vhezheni yeGIMP 3.0 yakaburitswa uye idzi shanduko dzayo
VS Kodhi yemabhurawuza. Microsoft ichiri kumashure kwevagadziri
FLB Music: odhiyo inoridza uye download maneja